Academy Express ကို Easybook မှ အသစ်ထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ
သတင်းကောင်း! Academy Express မှ အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များကို Easybook တွင်ယခုဝယ်ယူရရှိနိင်ပါပြီ!
Academy Express သည် ခရီးသည်များ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှူနှင့်လုံုခြုံမှူရှိစေရန်အတွက်အမြဲရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွင်း အဝေးပြေးဘတ်စ်ကားများဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့်အလျှောက် Academy Express မှလည်း သင့်အားအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့် ရန်ကုန် မှ မန္တလေးသို့ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။
သမိုင်းဝင်မန္တလေးမြို့၏ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ၊ဘုရားကျောင်းတော်များကိုလည်းသင့်အနေနဲ့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုကဲ့သို့ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းနေရာများကိုသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ယခုပဲ Academy Express ၏အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များကို Easybook တွင်ဝယ်ယူပြီး သင့်၏ ရန်ကုန် မှ မန္တလေး ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါ။